Akụkọ - Nyochaa ihe osise nke ụgbọ ala ndị mgbe ochie (ụgbọala ochie) ekele ụgbọ ala
Nyochaa foto nke ụgbọ ala kpochapụwo (ụgbọala ndị a ma ama) ụgbọ ala nlereanya ekele
Carsgbọala ochie, makwaara dị ka ụgbọ ala ochie, na-ezo aka tupu Agha Worldwa nke Abụọ ma ọ bụ ụgbọ ala ochie. Gbọala ochie ahụ bụ ngwaahịa nke agụụ agụụ. Ọ bụ ụgbọ ala ndị mmadụ jiri n’oge gara aga wee rụọ ọrụ ugbu a. Aha Bekee bụ ụgbọ ala ochie. Netwọk ụdị 0312 nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu gbasara foto nke ụgbọ ala ochie. Agbanyeghị, n'ihi enweghị okwu dị mkpa mgbe edepụtara ha, enweghị ike igosipụta ha n'otu n'otu ugbu a. Anyị ga-edozi ha ozugbo enwere ike.
Sunstar kwalitere Ford ihe atụ
Echiche nke ụgbọ ala kpochapụla malitere na 1973 wee pụta na akwụkwọ akụkọ Britain ama ama na ụgbọ ala kpochapụla. Ọ bụ ezie na ntụgharị asụsụ nkịtị ya kwesịrị ịbụ “ụgbọ ala ochie”, n’ihi agba anthropomorphic ya siri ike, okwu ahụ bụ “ụgbọ ala kpochapụwo” n’oge na-adịghị anya nwetara mmata nke ndị hụrụ ụgbọ ala amaala ma gbasaa ngwa ngwa, na-aghọ otu aha ochie nke ụgbọala ochie maka ndị hụrụ oke ụwa nile .
Agbanyeghị, ruo ugbu a, enweghị ụkpụrụ anabatara nabatara nke ụgbọ ala ndị ochie, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme ụgbọ ala na ndị na-anụ ụgbọ ala mara mma ka na-arụ ụka. Classiclọ ọrụ ụgbọ ala ndị America na-edepụta akara ma ọ bụ ihe atụ kachasị amasị ya (dịka: mmepụta 1925-1948) dị ka kpochapụwo zuru ezu, nke akọwapụtara dị ka "ụgbọ ala pụrụ iche, nke nwere njiri mara mma, usoro dị elu na nrụpụta". Ọ na-ahọrọ akara ndị America, mana ngwaahịa ndị Europe nwere akwa ụta nke mgbanwe ndị ahụ.
Anyanwụ kpakpando na-ebuputa ụdị Ford bụ Tudor balsam
Ọ bụghị ụgbọ ala ochie ọ bụla ruru eru ịbụ ụgbọ ala kpochapụla. Ezi ndozi bụ ihe dị mkpa dị mkpa. Na ahịa, enweghị ọtụtụ ụgbọ ala nwere kpochapụwo imewe. Dị nnọọ ka ọtụtụ ụgbọ ala dị ọnụ ala ụgbọ ala ezinụlọ anọ, ha bụ naanị ụzọ njem.
Ọkwa ọkọlọtọ nke kpochapụwo ụgbọala
Carlọ ụgbọ ala ochie nke America
Ihe ochie: ụgbọ ala niile tupu 1930
Production: ụgbọala niile tupu 1930
Kpochapụla: 1930-1948 mara ezigbo mma ụgbọ ala
Ugwu: 1946-1972 ụgbọ elu dị elu.
Obere mmeputa: ugbo ala ndi nwere “ihe puru iche” emeputara na obere onu mgbe agha Worldwa nke Abụọ gasịrị
Oldlọ ụgbọ ala ndị Britain ochie
N'ikwu okwu n'ozuzu, nkewa zuru ezu dị ka ndị a:
Tupu 1918, a na - akpọkọta ụgbọ ala niile dịka ihe ochie, nke e kewara n'ime Edward VII na onye agha;
Gbọ ala site na 1918 ruo 1931 bụ akara ama ama ama ama;
Site na 1932 rue 1945, ugbo ala bu akara ama ama;
Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, a na-akwanyere ụgbọala ndị na-anọchite anya ha ùgwù dị ka nke oge a.
Clubsfọdụ klọb na China
Gbọ ala ochie: tupu 1925;
Gbọ ala kpochapụwo: 1926-1941;
Biputa ndi agha ochie: mgbe 1945 gachara.
Ewere nkewa nke United States ka ọkọlọtọ n'ụwa. N'ihi na United States bụ ụgbọ ala kachasị ukwuu, nke nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụgbọ ala ndị a ma ama (isi ahịa nke ụgbọ ala ndị okomoko na Europe tupu na mgbe agha ahụ gasịrị bụ United States), na mgbe agha ahụ gasịrị, ndị America nwere nnukwu ego na ihe onwunwe ha Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe onwunwe kpochapụrụ ụgbọ ala ndị mara mma na Europe.